Muxuu Ku Saleysan Yahay Khilaafka Trump Kala Dhaxeeya Waddamada Kale ee NATO? -
HomeWararkaMuxuu Ku Saleysan Yahay Khilaafka Trump Kala Dhaxeeya Waddamada Kale ee NATO?
Muxuu Ku Saleysan Yahay Khilaafka Trump Kala Dhaxeeya Waddamada Kale ee NATO?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta uu magaalada Brussels kula kulmo hoggaamiyeyaasha kale ee gaashaanbuurta Nato, waxaana la saadaalinayaa in kulankaasi uu sii kala qeybin doono hoggaamiyeyaashani.
Ka hor inta uusan furmin shirka ayaa madaxweyne Trump waxa uu reer Yurub ku dhaliilay arrimaha ganacsiga halka xulufadiisa Nato uu ku eedeeyay in ay ku guul dareysteen in ay dhaqaale ku filan ku bixiyaan arrimaha gaashaandhigga.
Balse markiiba waxaa u jawaabay madaxa golaha reer Yurub Donald Tusk, oo Trump ku eedeeyay in maalin kastaa uu la soo taagan yahay dhaliil ka dhan ah reer Yurub.
Donald Tusk ayaa ugu baaqay Mareykanka in uu u mahadceliyo xulufadiisa, waxa uuna intaasi kudaray in reer Yurub ay kharash xooggan oo ka badan kan Ruushka iyo Shiinaha ay ku bixiyaan arrimaha gaashaandhigga.
Waxa uu Donald Tusk sheegay in Mareykanka uusan heli doonin, waligiina aysan soo marin xulufo ka wanaagsan reer Yurub, waxa uuna Trump xusuusiyay in ciidamada reer Yurub ay ka garab dagaalameen ku Mareykanka oo ay waliba ku dhinteen dagaaladii dalka Afqaanistaan kaddib weerarkii 11-kii Sebtembar ee saandkii 2001-dii lagu qaaday Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa saadaaliyay in kulanka maanta ee Nato uu ka adkaan doono kan isniinta dambe uu waddanka Findland kula yeelan doono dhiggiisa Ruushka, Vladimir Putin.
Khilaafka kharashka gaashaandhigga muxuu ku saabsan yahay
Trump ayaa waddamada kale ee gaashaanbuurta Nato ku eedeeyay in ay Mareykanka ka faa’iideysanayaan.
Gaashaanbuurtani Nato ayaa la aasaasay sanadkii 1949, si loogu babacdhigo midowgii Soofiyeed ee uu Ruushka hoggaaminayay.
Madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in inta badan waddamada xubinta ka ah Nato ay ka gaabiyeen hadafkii ahaa in meesha lagu gaaro sanadka 2024 waddamada Nato ay 2% miisaaniyaddooda ku bixiyaan arrimaha gaashaandhigga.
Waddamada Mareykanka, Giriigga, Estonia, UK iyo Latvia oo ka mid ah waddamada 29-ka ah ee xubinta ka ah Nato ayaa sanadkan kharashkooda gaashaandhigga gaarsiiyay heerkaasi, halka waddamada sida Poland iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay heerkaasi gaaraan.
Maxay waddamada Nato u walwalsan yihiin?
Madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka ayaa iyaguna sidaan oo kale ugu baaqi jiray waddamada reer Yurub in ay kharash badan ku bixiyaan arrimaha gaashaandhigga, haseyeeshee waddamada qaar ee Nato ayaa ka cabsanaya in dalabaadka joogtada ahi ee madaxweyne Trump ay waxyeelayn doonto niyadda waddamada Nato, taa oo sii xoojin doonto bey yirahdeen ujeeddada Putin oo ay ku eedeynayaan in uu doonayo in uu xasillooni darro ka abuuro waddamada galbeedka.
Waddamada qaar ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka Nato, waxaana kal hore hoggaamiyaha Jarmalka Angela Markel ay sheegtay in ay suurtagal tahay in Yurub aysan ku sii tiirsanaan Mareykanka.
In kastoo taasi ay jirto, haddana, saraakiil Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee reer Yurub u sheegay in la filayo in madaxweyne Trump uu waddamada kale ee Nato u xaqiijiyo sida ay uga go’antahay ilaalinta qodobka shanaad ee axdiga Nato, kaa oo dhigaya weerar kastaa oo ka dhan ah waddan xubin ka ah Nato in uu ka dhigan yahay weerar lagu qaaday waddamada Nato dhammaantood.
Kaddib shirka maanta ee Nato, madaxweyne Trump ayaa Britain sii joogaya muddo afar maalmood ah ka hor inta uusan ka qeybgalin shirka uu la yeelanayo hoggaamiyaha Ruushka.
Iyadoo Trump uu eegayo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka uu la leeyahay waddanka Ruushka ayaa haddana waxaa jira walaac laga muujinayo xiriirka sii xumaanaya ee Mareykanka kala dhaxeeya waddamada reer Yurub iyo sidoo kale waxyaabaha laga yaabo in uu kula heshiiyo madaxweyne Putin.
Madaxa golaha reer Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in marka Trump uu la kulmo Puntin ay kala caddaan doonto cidda saaxibka muhiimka ah iyo cidda dhinaatada weyn wadda.
Aragtida gudaha Mareykanka
Taageerayaasha madaxweyne Trump ee gudaha Mareykanka gaar ahaanna kuw aay ku weyn tahay waddaniyadda ayaa qaba ra’yi ah in Mareykanka uu yareeyo kharashka uu ku bixiyo Nato.
Waddamo badan oo reer Yurub ah ayaanan ku qanacsanayn qaabka uu Trump wax u wado balse Trump ayaa sheegay in xaaladdu ay ku soo dhammaan doonto is afgarad iyo in waddan kastaa uu ku farxo natiijada kulanka Nato.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in waddaamada reer Yurub ay ku adkeynayaan beeraleyda, shaqaalaha iyo shirkadaha Mareykanka in ay ka ganacsadaan gudaha waddamadooda dhanka kalena ay doonayaan in Mareykanka uu magaca Nato ku difaaco amnigooda.
Waddamada reer Yurub ayaa ah suuqa ugu weyn ee Mareykanku uu u dhoofiyo baayacmushtarigiisa waxaana sanadkii 2016 uu Yurub u dhoofiyay badeeco lagu qiimeeyay 501 bilyan oo doolar. Halka uu Yurub ka soo dhoofsaday alaabo ganacsi oo lagu qiimeeyay 592 bilyan oo doolar.
Bishii la soo dhaafay ayaa Mareykanku waxa uu dunida ka abuuray cabsi dagaal dhanka ganacsiga ah kaddib amrkii uu canshuuro dheeraad ah ku soo rogay waxyaabaha Mareykanka looga soo dhoofiyo waddamada reer Yurub, Canada, Mexico iyo waddamo kale oo ay Mareykanka xulufo yihiin. Reer Yurub ayaa dhankooda canshuur aargoosi ah ku soo rogay Ganacsiga Mareykanka looga soo dhoofiyo.